» झापामा २० करोड लगानीको रबर उद्योग सञ्चालन हुँदै, गोरखकालीपछिको दोश्रो उद्योग सफल होला ?
झापामा २० करोड लगानीको रबर उद्योग सञ्चालन हुँदै, गोरखकालीपछिको दोश्रो उद्योग सफल होला ?
२०७७ फाल्गुन १५, शनिबार १७:३४
झापा । नेपालमा रबर खेती शुरु भएको ३० वर्षपछि झापामा रबर उद्योग स्थापना भएको छ । कनकाई नगरपालिका–७ मा २० करोडको लगानीमा स्थापित कनकाई रबर इन्डस्ट्रिज सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छ ।
झापामा सामुदायिक बन, एग्रो फरेस्ट्रीलगायतका संस्थाले धेरै जग्गामा रबर खेती गरेका छन् भने करेसाबारीमा १० बोटदेखि दशौँ बिघा जग्गामा हजारौँ बोट रबर हुर्काउने किसानको सङ्ख्या झापामा सयौँ रहेको छ । किसानले खेती नहुने पाखो र बगर जग्गामा रबर लगाएर प्रति बिघा चार लाखसम्म वर्षेनी आम्दानी गर्दै आएका छन् । रबरको चोप मात्र नभएर यसका दाउरा र काठ महँगोमा बिक्री हुने गरेको छ भने रबर खेती लगाएको स्थानमा मौरीपालन फस्टाउने गर्दछ ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनले झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको वडा नं ८ लाई रबर ग्राम घोषणा गर्दै नमूना रबर खेतीका लागि सहयोग पु¥याउने भएको छ । एग्रो टुरिज्मको अवधारणाबमोजिम बुद्धशान्तिमा नमूनाको रुपमा रबर ग्राम परियोजना सुरु गरिएको रबर ग्रामका सचिव सीताराम बाँस्तोलाले बताए । फाउन्डेसनले भारतबाट उन्नत जातको बिरुवा ल्याएर किसानलाई बाँड्ने र प्राविधिक सहयोग पु¥याउने उनले भनाइ छ । रबर ग्राममा साना किसानलाई समेटिने र लघु उद्योग सञ्चालन गरी नोट बाँध्ने रोल रबर र इरेजर उत्पादन गरिने उहाँले जानकारी दिए । फाउन्डेसनले लघु उद्योग सञ्चालनका लागि प्राविधिक र आर्थिक सहयोग दिलाउने भएको छ ।
रबर बोटमा फल्छ भन्ने हेर्नका लागिसमेत रबर ग्राममा पर्यटक आकर्षित हुने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर घरबास सञ्चालनका लागिसमेत फाउन्डेसनले पहल गर्ने भएको छ । झापाको बाह्रदशीमा समेत अर्को रबर उद्योग स्थापनाको तयारी भइरहेको छ । रबरको उत्पादन बर्सेनि बढ्दै गएको हुँदा प्रशोधन उद्योग खुल्ने क्रम अझ बढ्ने सम्भावना छ । नेपालमा रबर खेतीको सम्भावना छ भनी पहिलो अनुसन्धान गर्ने विज्ञ तिलक भण्डारी छन् । उनले रबर खेती शुरु भएको तीन दशकपछि झापामा उद्योग स्थापना हुनु निकै ढिलो भए ता पनि खुशी मान्नुपर्ने बताए ।
झापाको माइपश्चिम क्षेत्रमा राजमार्गभन्दा उत्तरी इलाकामा रहेको रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनामा रबर खेती लगाउने हो भने मुलुक रबरमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने देखिएको छ । आयोजनाको हजारौँ हेक्टर जग्गा खाली छ भने सिसौ, मसलाजस्ता कमसल रुख हुर्काउनुको साटो रबर खेती लगाउनुपर्नेमा राज्यको ध्यान आकृष्ट हुनु पर्ने कनकाई रबर इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक बालकृष्ण सापकोटाले बताए ।रासस